PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2019-01-10 - Isaduke ehlathini inkwenkwana yakuNtabankulu
Isaduke ehlathini inkwenkwana yakuNtabankulu
SELE ilusuku lwesithandathu idukile inkwenkwana enonyaka omnye neenyanga ezisixhenxe izelwe egama linguNdibulele Msuthu yelali yaseMbangweni kuNtabankulu oko yathi yalandela utatomkhulu wayo ngethuba eyokuqokelela iinkomo ehlathini.
Oku kwenzeke ngoLwesihlanu umhla wesine ngorhatya. Ingxelo ephuma kuWarrant Officer Zilungile Nkamba wamapolisa ala mmandla, ithi utatomkhulu wexhoba uLubabalo Msuthu akakhange aqaphele ukuba uyalandelwa ngumzukulwana wakhe ngethuba esiya ehlathini.
UNkamba uthi uLubabalo wothuke akubuya ekuqokeleleni imfuyo xa ebuzwa ngomntwana lusapho. Utatomkhulu weva ngosapho ukuba umzukulwana ebemlandela ngethuba eyokungena ehlathini engaqaphelanga ukuba uyalandelwa. UNkamba uthi abecuphi kwakunye namapolisa atyelele kweli hlathi encediswa ngabahlali kodwa babuye nelize.
Idokethi lokuduka komntwana livuliwe kwaye kusaphandwa ngabecuphi kungayekwanga nokukhangelwa kweli hlathi lithe laduka uNdibulele. Amapolisa abongoza kuye nabani na onomkhondo ukuba aqhagamshelane nawo.